41 ruux ayaa geeriyootay, malaayiin kale way ku go’doosan yihiin Daadad ku rogmaday Bangladesh & India. | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta 41 ruux ayaa geeriyootay, malaayiin kale way ku go’doosan yihiin Daadad ku...
41 ruux ayaa geeriyootay, malaayiin kale way ku go’doosan yihiin Daadad ku rogmaday Bangladesh & India.
Daadad ku rogmaday Waddamada Bangladesh iyo India ayaa sababay geerida 41 ruux halka ay go’doon galeen Malaayiin ruux sida ay xaqiijiyeen saraakiil katirsan labada Dowladood oo ku howlan badbaadinta Dadka go’doonsan.
Goobo wax lagu barto & Tuulooyin ayay ku go’doonsan yihiin Dadka, iyada oo la howlgeliyay Ciidamo wata Doomo nooca dheereeya oo dul socda Wabiga iyo meel weliba oo biyaha fatahaadda ka dhashay ku qulqulayaan.
Qof kamid ah Dadka Deegaanka ayaa Wakaaladda Wararka AFP u sheegay in daadadka ay ku geeriyoodeen Carruur da’ ahaan u dhaxeeya 12 sano ilaa 14 halka la badbaadiyay tiro kale oo la dejiyay meelo loogu talagalay in la isugu geeyo.
Waddooyinka waaweyn waxaa ka sare maray biyaha Daadadka ah, Dadka qaarkood waxa ay halis ugu jiraan in ay biyahaas ka dul maraan, meelaha buuraha ah ayay raadsanayaan si ay uga fogaadaan meelaha biyo degeenka ah.
Hay’adda saadaalinta Cimilada ee Bangladesh ayaa sheegtay in labada cisho ee soo socda ay suuragal tahay in ay da’aan roobab xooggan oo daadad horleh ku rogi kara Tuulooyinka qaar ee cabsida laga muujinayo.
Previous articleWasaaradda Waxbarashada XFS oo maanta billawday qaadista Imtixaanka fasalka 12aad oo ay galayaan 35 kun oo Arday.
Next articleCiidanka Booliiska Soomaaliya oo Xalay Toogasho ku dilay mid ka mid ah rag dhac ka geysanaayay Muqdisho